တူးပေးမည့်သူများ EA ၏ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်တူးပေးမည့်သူများကို EA
တူးပေးမည့်သူများကို EA နေ့နှင့်အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သောကာလအတွင်းအထူးသဖြင့်ဦးတည်ရွှေ့ဖို့စျေးနှုန်းစွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါ backtest 2009 ထံမှကောက်ယူခဲ့သည်။
အဆိုပါ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး စျေးကွက်အခြေအနေအပေါ်ကိုအခြေခံပြီးအနေအထားအသံအတိုးအကျယ်တွက်ချက်။ အဆိုပါကုန်သွယ်စက်ရုပ်ပျမ်းမျှအား4မှတက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါ EA ၏ StopLoss မသုံးပါဘူး။
ဤသည်ကို EA နှစ်ခုသည် Modes မှာအလုပ်မလုပ်နိုင်သည်
ကွန်ဆာဗေးတစ် mode ကို (ConservativeMode = ဟုတ်မှန်သော) ။ ဒီ mode မှာ, အ DiggerEA martingale MM \_ ပျှမ်းမျှ \_ ဇယားကွက်မသုံးပါဘူး။ အဆိုပါကုန်သွယ်စက်ရုပ်အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ရပ်တန့်အရှုံးနှင့်အချိန်ရပ်တန့်အသုံးပြုသည်။
ရန်လို mode ကို (ConservativeMode = အယူမှား) ။ ဒီ mode မှာ, အကုန်သွယ်စက်ရုပ်ပျမ်းမျှအား4မှတက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါ EA ၏မှတ်တိုင်အရှုံးမသုံးပါဘူး။
Digger EA - အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း
TIMEFRAME - M15 ။ ငွေကြေးအားလုံး: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, NZDUSD။ အဆိုပါ EA ၏အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်တိုင်းကို tick အားဖြင့် backtested စေနိုင်ပါတယ်။
StartLots - အများကြီးအရွယ်အစားကိုစတင်။ ဒါကကုန်သွယ်ရေးဖွင့်လှစ်ရန်ကနဦးအခြေစိုက်စခန်းတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစျေးကွက်အခြေအနေအပေါ်အခြေပြု EA ၏အားဖြင့်ပြုပြင်ထားသောပေမယ်ထက်ပိုမနှစ်ကြိမ်နိုင်ပါသည်။
UseMM_Balance - သိုက်ငွေကြေးတန်ဖိုး။ ဒီ option ကို (0 ထံမှဆိုလိုသည်မှာကွဲပြားခြားနားသော) သတ်မှတ်ထားလျှင်, ထို့နောက်စတင်တွေအများကြီးသိုက်၏ UseMM_Balance ၏အသီးအသီးစိတျအပိုငျးနှုန်းတွက်ချက်သည်။0ဟုသတ်မှတ်လျှင် စတင်. တွေအများကြီး fixed နှင့် StartLots ညီမျှသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သိုက် 0.1 အခါသိုက် 300 အခါ, StartLots = 300 နှင့် UseMM_Balance = 0.1 လျှင်သည်, EA ၏, 600 တွေအများကြီးတစ်ခုအလို့ငှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် - 0.2 တွေအများကြီး, သိုက် 900 အခါ - 0.3 တွေအများကြီး, etc ဒီ parameter သည် reinvestment ဘို့လိုအပ်ပါသည်။
StartLots% Depo -% အတွက်ကနဦးတွေအများကြီးတန်ဖိုး။ ဘယ်အချိန်မှာမပေးသုည, ကနဦးတွေအများကြီးသိုက်၏%, StartLots အဖြစ်တွက်ချက်သည်နှင့် UseMM_Balance parameters တွေကိုလျစ်လျူရှုနေကြပါတယ်။ သုညလျှင်, EA ၏ StartLots နှင့် UseMM_Balance နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
TakeProfitPip - pips အတွက်အမြတ်အစွန်းပစ်မှတ် (4-ဂဏန်းကိုးကား) သည်ကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်စျေးနှုန်း၏အဖြစ်။
TrailingStopPip - pips အတွက်ကပ်တွယ်မှုကိုရပ်တန့်။
StepPip - pips အတွက်ပျမ်းမျှ၏ခြေလှမ်း။
StepAutoAdjust - ပျမ်းမျှ၏ခြေလှမ်းများ၏အလိုအလျောက်ညှိနှိုင်းမှု။ StepAutoAdjust စစ်မှန်တဲ့ = လျှင်, ထိုခြေလှမ်းတန်ဖိုး intraday နှင့်နေ့စဉ်တည်ငြိမ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး EA ၏အားဖြင့်ချိန်ညှိအလိုအလျောက်ဖြစ်လိမ့်မည်
SpreadFilterPip - pips အတွက် filter ကိုပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ပြန့်ပွားကဤတန်ဖိုးကိုထက်ပိုလျှင်, signal ကိုလျစ်လျူရှုခံရပါလိမ့်မယ်။
ConservativeMode - if စစ်မှန်တဲ့, ထို EA ၏ပျှမ်းမျှနှင့် martingale \_ ဇယားကွက် element တွေကိုမသုံးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ DiggerEA သာအဆင်သင့်အခြေအနေများကုန်သွယ်မှုမည်ဖြစ်ပြီးရပ်နားဆုံးရှုံးမှု (StopLossPip) နှင့်အချိန်မှတ်တိုင် (TimeStop) ကို အသုံးပြု. အန္တရာယ်ကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။
PchFilter - if စစ်မှန်တဲ့အဆိုပါ DiggerEA အဆိုပါ intraday ကုန်သွယ်အကွာအဝေးအတွင်းစျေးနှုန်းများ၏တည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး filter ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ConservativeMode အဘို့ကိုသာစစ်မှန်တဲ့ = ။
% ATR SignalBarSize အဆိုပါအချက်ပြဘား၏ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားက။ ConservativeMode အဘို့ကိုသာစစ်မှန်တဲ့ = ။
WickSize% - အဆိုပါအချက်ပြဘား၏အရိပ်အရွယ်အစား (ဝယ် \_ ရောင်းဘို့အထက် \_ နိမ့်) ။ ConservativeMode အဘို့ကိုသာစစ်မှန်တဲ့ = ။
အချိန်မှတ် - ကုန်သွယ်ရေးအမြတ်အစွန်းယူသို့မဟုတ်အရှုံးကိုရပ်တန့်ရောက်ရှိမပါဘူးဆိုရင်ရာထူးပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်သည့်ပြီးနောက်ဘားအချို့နံပါတ်များကို။
နည်းပညာဆိုင်ရာရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှု။ ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်သောအခါ, ရှိသမျှအမိန့်ဟာ EA ၏အားဖြင့်ပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။0ဟုသတ်မှတ်လျှင်, ရပ်တန့်အရှုံးကိုပိတ်ထားသည်။
StopLossPip - entry စျေးနှုန်းကနေ pips အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်။ The StopLossPip စစ်မှန်တဲ့ ConservativeMode = အဘို့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
StopOutLevel% - EA သည်ကုန်သွယ်ရေးရာထူးအားလုံးကိုပိတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော%% ရှိအကောင့်марဂျင့်အဆင့်။
EquityStopLoss% - ကန ဦး ရှယ်ယာမှရာခိုင်နှုန်း။ အကယ်၍ လက်ရှိရှယ်ယာသည် EquityStopLoss% အောက်သို့ကျသွားပါက EA သည်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးကိုပိတ်လိမ့်မည်။
PriorityLevel=0... 10 ။ အကြံပေးသူများစွာသည်နေရာအသစ်ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖွင့်ရန်အချက်ပြမှုရရှိပါကပိုမိုမြင့်မားသော PriorityLevel (0 - အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေး) နှင့် EA မှဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။
MagicNumber - EA ၏အမှာစာအရေအတွက်။ တူရိယာမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရန်သင်လိုအပ်သောငွေကြေးအတွဲများအတွက်သီးခြားဇယားကွက်ကိုဖွင့ ်၍ သင်၏တစ်ခုချင်းစီပေါ်တွင် EA ကိုပူးတွဲရမည်။ ဤကိစ္စတွင် DiggerEA ၏ MagicNumbers အားလုံးသည်အတူတူပင်ဖြစ်ရမည်။ စွန့်စားမှုကိုလျှော့ချရန်အတွက် EA တစ်ခုသာကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ဥပမာ DiggerEA တစ်ခုသည်အဖွင့်အချက်ပြမှုကိုရရှိပြီးအခြား DiggerEA အနေအထားကိုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သောအခါ၊ အချက်ပြမှုကိုလျစ်လျူရှုပြီးအနေအထားအသစ်ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။
ID - EA အတွက်ထူးခြားသောအမှတ်အသား။ ကျွန်ုပ်၏ EAs (Digger, Miracle ကဲ့သို့) တူညီသော MagicNumber ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအခါအမိန့်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
Digger EA - နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ
အနည်းဆုံးအပ်ငွေ - $ 200
နိမ့်ဆုံးတွေအများကြီး - 0.01 ။
အနည်းဆုံးသြဇာ - 1: 100၊ ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုအကြံပြုသည်။
အကောင့်အသစ်များ၏အကြံပြုအမျိုးအစားများ - NDD နှင့် ECN ။
အဆိုပါ EA ၏ optimization မလိုအပ်ပါဘူး။